Yeremiya 6 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
6 Ngenani ekhusini, nina nyana bakaBhenjamin, nisuke phakathi kweYerusalem; naseTekowa+ vuthelani isigodlo.+ Naphezu kweBhete-hakerem+ phakamisani umqondiso womlilo; ngenxa yokuba nijongene nentlekele evela ngasemntla, ukuwa okukhulu.+ 2 Intombi yaseZiyon ifana nomfazi obukekayo nokhuliswe ephethwe ethe-ethe.+ 3 Beza kuyo abalusi nemihlambi yabo. Bamisa iintente zabo nxamnye naye macala onke.+ Badla ngamnye inxalenye yakhe.+ 4 Bangcwalise imfazwe nxamnye nayo:+ “Vukani, masinyuke emini emaqanda!”+ “Yeha ke thina, kuba imini ithambekile, kuba amathunzi okuhlwa ayoluka!” 5 “Vukani, masinyuke ebudeni bobusuku size sizonakalise iinqaba zayo zokuhlala.”+ 6 Kuba utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Gawulani imithi+ nize niyifumbele iYerusalem umsele wokungqinga.+ Isisixeko esimele siphenduliswe.+ Yingcinezelo kuphela phakathi kwaso.+ 7 Njengoko umthombo uwagcina epholile amanzi awo, ngokunjalo nayo ibugcine bupholile ububi bayo. Kuvakala ugonyamelo nokuphangwa kuyo;+ isifo nesibetho ziphambi kobuso bam rhoqo. 8 Lungiseka,+ Yerusalem, ukuze umphefumlo wam ungaphethuki umke kuwe uzothekile;+ ukuze ndingakumisi uyinkangala ephanzileyo, ilizwe elingamiwayo.”+ 9 Utsho uYehova wemikhosi ukuthi: “Nakanjani na baya kuyibhikica intsalela kaSirayeli kanye njengomdiliya.+ Buyisa isandla sakho njengalowo uvuna iidiliya emdiliyeni onamasebe anabileyo.” 10 “Ndiya kuthetha ndilumkise bani na, ukuze beve? Khangela! Indlebe yabo ayalukanga, kangangokuba abakwazi ukunikela ingqalelo.+ Khangela! Lona kanye ilizwi likaYehova lilungcikivo kubo,+ lizwi elo bangayoliswayo lilo.+ 11 Yaye ndizele ngumsindo kaYehova. Ndidiniwe kukuwubamba.”+ “Wuphalazele phezu komntwana osesitratweni+ naphezu kweqela labafana abangamakholwane ngaxeshanye; kuba nabo baya kubanjwa, indoda kunye nomfazi wayo, indoda endala kunye nalowo uzeleyo yimihla.+ 12 Ngokuqinisekileyo nezindlu zabo ziya kunikelwa kwabanye, amasimi nabafazi ngaxeshanye.+ Kuba ndiya kusolula isandla sam nxamnye nabemi belizwe,” utsho uYehova.+ 13 “Kuba ukususela koyena mncinane kubo ukusa koyena mkhulu kubo, wonk’ ubani uzenzela inzuzo yokungekho sikweni;+ nokususela kumprofeti ukusa kumbingeleli, ngamnye wenza ngobuxoki.+ 14 Kwaye bazama ukukuphilisa ngokulula ukuwa kwabantu bam,+ besithi, ‘Luxolo! Luxolo!’ kungekho luxolo.+ 15 Baziva beneentloni na ngenxa yokuba babenze into ecekisekayo?+ Phakathi kwezinye izinto, ngokuqinisekileyo abaziva beneentloni; kwaye abakhange bazive bethotyiwe.+ Ngoko ke baya kuwa phakathi kwabo bawayo;+ ngexesha endimele ndibaphendulise ngalo baya kukhubeka,” utsho uYehova. 16 Utsho uYehova ukuthi: “Yimani ngxi ezindleleni, nize nibone, nibuzise ngeendlela zakudala, apho ngoku, ikhoyo indlela elungileyo;+ nize nihambe kuyo,+ niyifumanele ukonwaba imiphefumlo yenu.”+ Kodwa bathi: “Asizi kuhamba.”+ 17 “Kwaye ndanivelisela abalindi,+ ‘Nikelani ingqalelo kwisandi sesigodlo!’”+ Kodwa bahlala besithi: “Asizi kunikela ngqalelo.”+ 18 “Ngoko ke yivani, nina zintlanga! Nize nazi, nina ndibano, oko kuya kuba phakathi kwabo. 19 Phulaphula, mhlaba! Yabona, ndisizisela intlekele esi sizwana+ njengesiqhamo seengcamango zaso,+ kuba asinikelanga ngqalelo kuwo amazwi am; nomthetho wam—sawugatya.”+ 20 “Kubaluleke ngantoni na kum ukuzisa kwenu intlaka yokuqhumisa yaseShebha+ nengcongolo yeziqholo elungileyo evela kwilizwe elikude? Umnikelo wenu otshiswa kuphele awukholisi,+ nemibingelelo yenu ayindikholisi.”+ 21 Ngoko ke utsho uYehova ukuthi: “Yabona, ndisibekela isikhubekiso+ esi sizwana, yaye ngokuqinisekileyo siya kukhubeka kuso, ooyise noonyana xa bebonke; ummelwane neqabane lakhe—baya kutshabalala.”+ 22 Utsho uYehova ukuthi: “Khangela! Kuya kuphuma isizwana kwilizwe lasemntla, kuvuswe uhlanga olukhulu luvela kweyona mimandla ithe qelele yomhlaba.+ 23 Baya kubamba isaphetha nentshuntshe.+ Bakhohlakele, yaye abayi kuba nalusizi. Ilizwi labo liya kugquma njengolwandle,+ kwaye baya kukhwela amahashe.+ Baya kuma ngokolungelelwano lwedabi njengendoda yemfazwe nxamnye nawe, ntombi yaseZiyon.”+ 24 Siyivile ingxelo engabo. Ziwile izandla zethu.+ Sibandezelekile, yaye sinenimba enjengaleyo yomfazi ozalayo.+ 25 Musa ukuphuma uye entsimini, ungahambi nasendleleni; kuba kukho ikrele lotshaba, kukho ukothuka macala onke.+ 26 Ntombi yabantu bam, bhinqa irhonya+ uze uzibhuqabhuqe eluthuthwini.+ Ukuzila kwakho kwenze kube njengokonyana okukuphela kwakhe, isijwili sobukrakra;+ ngenxa yokuba siya kufikelwa ngumphangi ngequbuliso.+ 27 “Ndikwenze umvavanyi wesinyithi phakathi kwabantu bam, lowo ufuna ngokucokisekileyo; uze uyiphawule kwaye uyihlolisise indlela yabo.+ 28 Bonke bangabona bantu baneenkani,+ bahambahamba njengabanyelisi+—ubhedu nentsimbi. Bonke bayonakalisa.+ 29 Iimfutho+ zitshile. Emlilweni wazo kuphuma ilothe.+ Baqhubeka beyisulungekisela ilize, nabo babi abahlulwanga.+ 30 Ngokuqinisekileyo abantu baya kubabiza ngokuba yisilivere egatyiweyo,+ kuba uYehova ubagatyile.”+